fampiratiana efijery mpanamboatra | China sy ny mpamatsy efijery fampirantiana
10 INCH Bus fiara SUV Vehicle tafo maso HD Screen Bus entertainment system Monitor
15.6 inch IPS touch screen android car monitor monitor Support IR / FM Transmitter, monitor an'ny tv amin'ny tafo bus.
15.6 INCH Digital lcd efijery USB SD MP5 Roof Mounted Flip Down Overhead Monitor ho an'ny fiara
Ny bisy lavitra sy ny bisy mpizahatany, fiara fitateram-bahoaka, bisy, lamasinina bala, metro, fiaran-dalamby, sns.
13.3 INCH hazavana dôlôzy indroa namboarina mamela anao hijery ny tianao indrindra amin'ny andro rehetra
11,6 santimetatra ny fahitana ny famahana ny efijery: 1366 * 768 Function: USB / HDMI / FM / 1080P
Famahana efijery IPS 15,6 inch: 1920 * 1080 Endri-javatra: USB / HDMI / FM / 1080P
17,3 santimetatra ny sakany amin'ny fijerena ny efijery angla: 1920 * 1080 Endri-javatra: USB / HDMI / FM / 1080P
12 INCHBus car screen monitor HD vaovao super Slim 19.5 santimetatra Android atsipazo ambany fanaraha-maso bu
Ento miaraka amin'ireo seho tianao sy sarimihetsika tianao indrindra ity XO Vision 7 ″ Widescreen Overhead Monitor ity. Izy io dia manana monitor miaraka amin'ny DVD Player sy IR / FM Transmitters. Ny zanakao na ny mpandeha hafa dia mankafy mijery fandaharana mazava sy mazava amin'ny efijery fito santimetatra an'ny maso XO. Na handeha hamonjy làlana lavitra miaraka amin'ny fianakavianao ianao na handehandeha manodidina ny tanàna, dia mampiala voly ny rehetra izany mba hahafahanao mifantoka amin'ny fiara. Ny LCD 7FT widescreen TFT miaraka amina mpilalao DVD natsangana dia mifanaraka amin'ny karazana rakitra media rehetra amin'ny kapila. Azonao atao ny mijery sary, mihaino mozika, na mijery sarimihetsika eny an-dalana miaraka amin'ny monitor XO Vision. Ny fitsangatsanganana an-dàlambe mahafinaritra sy mahafinaritra izao dia azo antoka miaraka amin'ireo fitaovana ireo miorina amin'ny tampon-tranonao. Fanandramana fijerena tsara miaraka amina horonantsary an-tsary feno LCD feno horonan-tsary amin'ny HD feno & mpandefa IR ao anaty ho an'ny fampiasana finday tsy misy tariby.
11.6 INCH Bus overhead tampon'ny efijery fanaraha-maso ny tontolon'ny fialamboly horonan-tsary
15 mirefy 1080P FHD lcd tafo fiara fitetezam-paritany tv Android Fanaraha-maso ny tafo fiara Android input / SD.
Famolavolana mirindra - Amin'ny alàlan'ny famolavolana bokotra tokana ataonay dia nanamora kokoa ny fampiasanao ilay singa izahay. Izy io koa dia namela anay hanatsara azy io ary hiseho ho kanto kokoa, manampy azy tsy hifangaro amin'ny fiara ao anaty fotsiny fa hanatsara azy io.
9 INCH Fipetrahana bus TV Monitor 1080P fiara Video tv HD Android Roof Monitor ho an'ny fiara fitateram-bahoaka
Mahazoa fialamboly eny an-dalana miaraka amin'ity Flipdown Monitor avy amin'ny Legacy ity, tonga lafatra ho an'ny fitsangatsanganana an-dàlana amin'ny fiara rehetra. Miaraka amin'ny efijery 15-inch sy vahaolana 800 x 600 teboka avo lenta dia mahazo sary madio sy mazava ianao eo am-pijerena ireo seho na sarimihetsika tianao indrindra. Afindra ny efijery horonantsary hahazoana ny fomba fijery tonga lafatra miaraka amin'ilay fisehosehoana haavo 45 degre, ary mankafiza ny fijerenao na oviana na alina na andro miaraka amin'ny hazavan'ny dome azo ampiasaina. Ny fampidirana horonantsary 2 dia ahafahanao manantona mpilalao DVD (amidy misaraka) na safidy mpilalao horonantsary hafa, ary ny safidy fampidirana am-peo sy ny vokatra dia manome fihainoana namboarina.
10.3 ″ Atsimbadika ny Monitor LCD miaraka amin'ny DVD Player natsangana, ny fidirana MHL MobileLink ary ny safidy 3 ho an'ny trano ataon'ny Power Acoustik®. Ity vokatra avo lenta ity dia namboarina tamim-pahaizana manokana mba hanarahana ny fenitra indostrialy henjana mba hanolorana fangaro ny endrika mahay mandanjalanja sy ny asa-tanana avo lenta. Namboarina tamin'ny fitaovana namboarina tamin'ny indostria tamin'ny fampiasana fitaovana vaovao, manome antoka ny fahamendrehana maharitra sy ny lanjany maharitra izy io. Ity vokatra ity dia miavaka amin'ny alàlan'ny fanamafisana kalitao tanteraka, tsy misy toa an'iza na iza.